Indonesia in Focus: Izintandokazi izivakashi ibala zomhlaba.
The ride wawungakapheli (379)
(Ingxenye amathathu namashumi ayisikhombisa nesishiyagalolunye), Depok, West Java, Indonesia, September 6, 2015, 1:40 pm).
Ekuqaleni kuka-1982, ngemuva ngayeka njengesisebenzi sikahulumeni ngesikhathi Directorate General of Higher Ministry Education of Education and Culture, isikhathi sami sokuqala ngokuvakashela noma kwamanye amazwe, ngoba bafuna isikole at California State University, Fresno, California.
Baphelezela ubaba nomama nabafowethu eziyisishiyagalolunye kanye nodade I ngokusebenzisa UHalim Perdana Kusuma International Airport, lapho Indonesia akanawo sezindiza Soekarno-Hatta. Uma ngagibela indiza of Japan Airlines (Jal) Jumbo 747, esikhulu ezimbili-level ndiza, umzila kokuma at Changi Airport, Singapore futhi Narita Airport, Tokyo, ngaphambi kokuqhubeka towards indiza San Francisco Tokyo. Ibhayisikobho San Francisco ngagibela indiza eya emzini Fresno Air California. Esikhumulweni sezindiza Fresno, ngiye wacosha abazali bami bokutholwa Bob Stump nomkakhe (Dee) ngoba ngihlala kulo mndeni izinyanga eziningana, ngaphambi ngathuthela efulethini kuyinto ezakhelene Masjid Fresno, okuyinto etholakala amamitha 50 kuphela kude campus of California State University, Fresno.
Kuyaqondakala Indonesia (Jakarta), lapho akusiyo zanamuhla njengoba manje, hhayi ezitolo ezinkulu eziningi (super market), akukho toll road, ngakho lapho ngayeka iyathutha at Changi Airport ushintsho izindiza Jal abanye, nakuba amahora amathathu kuphela, ngisebenzisa emhlabeni zezindiza Changi , Lapho Changi sezindiza wanamuhla kakade, kukhona indlela ukuhamba, izitebhisi esiqwini bezindiza futhi elikhulukazi yezitolo yagcwala ezihlukahlukene imikhiqizo eziye okungewona UHalim Perdana Kusuma.
I zazithande kecanggigan futhi ekuseni zanamuhla ukuba Changi sezindiza, Ngiyathanda bephuma endaweni enkulu (Jakarta), towards isimo emzini like Singapore. Salibangisa Tokyo eSingapore, ukuqondana ulwazi ngithola indiza, njalo umfokazi othile zokuthutha e Tokyo, anikwa visa free ukuvakashela Japan izinsuku ezintathu. Ngamunye peumpang Jal towards amazwe angaphandle kanye zokuthutha e Tokyo, waklonyeliswa by Jal izindawo zokuhlalisa khulula izinsuku ezintathu ngesikhathi Hotel Nikko Narita.
Leli thuba I sebenzisa ukuvakashela izivakashi izikhungo ezehlukene emzini Tokyo. Lapho kuqala sase sifika Narita sezindiza uye wangena entwasahlobo, okuyinto nje ebusika ngezikhathi, lapha I nomuzwa cool (kubanda) yaqale kuleli lizwe snowy like Japan. Ibhayisikobho Narita sezindiza sagibela Shuttle majors imizi Tokyo (ukuntwela town), kuze emadabukakusa edolobheni emzini Tokyo, sisuke ukubhalisa in the agency wendawo travel ababecindezela sibheke izivakashi ehlukahlukene e Tokyo, esukela ekuphumeni NHK Tower, ukugibela a tour isikebhe umfula ehlukanisa emzini Tokyo, lapho izikebhe yokwenza amapharele yokufakelwa, esigodlweni Japanese yoMbusi, lapho itiye Warung, kanye nezinye izindawo izivakashi. Ngiyabahlonipha kusukela Tokyo (manje linabantu million 40, amanetha ngaso leso sikhathi, kanye neminye imizi engake wavakashela ezifana Osaka. Ibhayisikobho Osaka ukuba Tokyo us a esheshayo ngesitimela. Tokyo Kodwa ezinabantu, kwakuqabukela nazo ukuminyana endleleni (traffic Jam) , cishe ngoba Tokyo kakade isimiso esiyinkimbinkimbi zomphakathi, esukela Subway (endleleni sub) ine, izitimela Isitimela kanye nezinye izithuthi zomphakathi kukhona traffic okuhle futhi uhlelwe kahle.
Ezenye uhambo indawo Ngenza kwaba sibukela ehlobo, ngokuvamile esewonke ngenyanga ka June (ehlobo) abafundi kungenzeka off, futhi kubafundi abafuna ukuqhubeka ekolishi (short-term) uvumelekile. Unversitas ngokuvamile ukufundelwa US kukhona izinyanga ezine, semester ebusika, intwasahlobo, ihlobo, futhi autumn uhhafu isizini. In the semester ehlobo ngo-1983, mina manfatkan ukuhamba America. Ekuqaleni kwehlobo I hitchhiked abafundi komfundi yangasese kusuka Malaysia (Hishamuddin), wafunda Fresno bangakunaki siqu esikhundleni Mara scholarship. Ibhayisikobho Fresno eSan Francisco ukuthatha amahora amathathu, omunye ohlukile lo muzi izakhiwo abakhileyo endlini, lapho kade uthonywa yilokho isiko ezakhiwo Germany, France, eNetherlands, Ireland futhi isiko imvelaphi European ezinye, azi umuzi owakhiwe ngabantu ezayo bezizwe ezihlukahlukene of Europe , futhi of China (China Town), ePhilippines kanye namanye amazwe amaningi.
Ibhayisikobho San Francisco siyihlola ogwini California, emzini ka Los Angeles, cishe emihlanu amahora, kulo muzi sifika Disney Land and eziningi nezinye izivakashi izingosi. Angikaze wathatha emzini San Diego, lapha sasikwazi ukubona Sea World kanye nezinye ezokuvakasha zasolwandle. Izinyanga ukuba ezimbili ehlobo lwesithathu ngazama bahamba usebenzisa ibhasi (Grey Hound), kanye amathikithi isizini ithikithi izinyanga ezimbili, okusho ukuthi amathikithi sonyaka lesi thina singashintsha-ushintsho ibhasi ngesikhathi samabhasi ngaphandle kokuthenga ithikithi entsha. Imininingwane yohambo lwabo thina Fresno ukuba Los Angeles, kusukela Los Angeles saqonda ukuba eTucson nomuzi Phoenix e Arizona, bese ukuba Dallas futhi Houston, Texas, e Texas, sabhekisa amabombo emzini ka El Paso, El Paso sawela phezu edolobheni Trijiudad Juarez (Mexico). Ibhayisikobho Texas saqonda Albuqaque, Alabama ngaphambi ababeya Missouri, futhi waqhubeka Virginia, emzini Philadelphia, ngaphambi emzini New York. Njalo umuzi futhi izivakashi amasayithi isimo sisuke senza isikhathi ukuwubona, ngezinye izikhathi ngoba azikho izinto zokuthutha umphakathi sima kemdaraan siqu kumasayithi izivakashi (Ukudunwa).
Ngaleso sikhathi, izivakashi zakwamanye amazwe namanje avunyelwe ukuba ukukhuphuka Statue of Liberty up ekhanda kwesithombe (asevaliwe). Kwathi kusekhona WTC isakhiwo twin, phansi phezulu unikezwa izivakashi. Ngaphambi Philadelphia, sakwazi ukuvakashela Washington DC. Ngesikhathi uhambo olude ukuthi mina nje walala ebhasini Arau ibhasi siteshi, nje ushiye izinto yami eydijithali khona, futhi izindlu zangasese for eyigeza kulesi siteshi. Ngichitha ebusuku (uhlale ehhotela), kwadingeka lapho efika e New York, ukuhlala at the Youth Hostel eyodwa-eziyishumi, ama-passport futhi eziyigugu zibekwe phambi Office. Kuyaqondakala amakamelo matasa yizivakashi insizwa France, Germany, eMexico nakwamanye amazwe, (ngesikhathi kubiza $ 3 per ukuhlala ebusuku ashibhe kakhulu ikakhulukazi uma izinga lokushintshisana kwaba $ 1:. RP 500, -
Uma emzini Memphis sabona indlu ukuthi wenza Elvis Presley Museum. In the Grey Hound Bus Tour sishiya mkhondo uthi eningizimu kuya New York, Dlulisa amehlo uthi enyakatho ngaphambi kokubuyela ukuba Fresno. Ngokungafani United States, okuyinto kakhulu ububanzi (50 ithi), kanti kwamanye amazwe aseYurophu kukhona izwe elincane, like izwe engake wavakashela ezifana Netherlands, Germany, Austria, Hungary, futhi Spain. Kuleli zwe savakashela tempay eziningi ezikhangayo, ezifana Berlin, Humburg, Amsterdam, The Hague, Budapest, Vienna, Madrid, Sevilla, kanye nezinye izindawo izivakashi ezifana endaweni lapho Islam yake yabusa imibuso eSpain kanye nakwezinye izindawo izivakashi.
Bahamba in the US ihlukile uma senza esetshenziswa ibhasi, ukuthi eYurophu sisebenzisa izitimela ezingaphezu. Uma ngesikhathi US thina uma ufuna adle ukudla kosher siye esitolo (mini emakethe) okuqondene Muslim wendawo noma amaSulumane Pakistan, India naseMpumalanga Ephakathi naseNyakatho Afrika, bese eYurophu izivakashi Muslim ngokuvamile uvakashela retaurant (restaurant) ukuthi ephethwe amaSulumane wendawo noma amaSulumane abadabuka Turkish ehlakazeke kakhulu sandile Europe, ikakhulukazi Germany neFrance.
Izintandokazi izivakashi spot in duna
Vacation ngokuqinisekile into emnandi kakhulu, ikakhulukazi uma uhlela ukuba uchithe amaholidi abo aphesheya. Well lapha Ngizoxoxa izindawo izivakashi ezithakazelisayo emhlabeni World.
inkatho cherry ezweni izinto Uhambo ukuba Japan kufanele kube mnandi. Kukhona izindawo eziningi kangaka Japan babe ezithakazelisayo futhi kuwufanele ukuvakashelwa. Uma uhlela ukuba uthole khona, kukhona ngempela a lot of tour guide services ukuthi ngeke uphile ukujabulela ubuhle Japan. 1.Ueno Park kanye edume Japanese cherry Izimbali ezinhle kakhulu. Uma ufuna ukujabulela ubuhle le mbali, beze Ueno Park in spring ukuthi yenzeke ngezithuba March kuya May. Ueno Park kwaba indawo edume kakhulu futhi iye yaba indawo izivakashi efiseleka kakhulu eJapane ukwenza Hanami, okungukuthi epikinikini bejabulela zezimbali izimbali cherry.
2. Fuji-Q Highland Tourism Japan leli fomu omunye yokuzijabulisa amapaki ukuthi ukukhonza ugibele amadlingozi kakhulu, omunye okuyinto a coaster roller ukuthi kakhulu nge trajectory eside. Ueno Park kwaba indawo edume kakhulu futhi iye yaba indawo izivakashi efiseleka kakhulu eJapane ukwenza Hanami, okungukuthi epikinikini bejabulela zezimbali izimbali cherry.
3. Disney Resort, Tokyo An park yokuzijabulisa wakha emzini Tokyo, Lots of ugibele ukuthi sikwazi ukujabulela lapha, yebo cishe azihlukile kakhulu kunalezo Dufan Ancol, Jakarta, Indonesia Ukucinga ogama lakhe ngeke uhlukane pemaianan Air, Flying, Coster, kungenzeka kube kuphela indawo elenza kukhanga kakhulu eJapane. Kodwa uma kubhekwa kusukela igama "Disney" ibonakala ephelele.
The Netherlands Akwaziwa kuphela lo mshini kuphela. The Netherlands ingenye ethandwa izivakashi emhlabeni. Kukhona ungaziqhenya ukuthula of the ezizungeze yemvelo ezindaweni zasezulwini. Abantu kukhona inobungane futhi nice. Ungakwazi kalula asebenzise izakhiwo sokuqasha iholidi. Ukukhetha ezifana eziqashisayo holiday emakhaya, esiza ukuba ukunciphisa izindleko kokuhlala kwakho. 1. Volendam Omunye odumile eheha izivakashi Netherlands iwukuba Valendam., Where singakwazi ukuthatha izithombe imvunulo 'londo' ala abadobi elidala school. Yebo, lo Volendam esidlule okudotshwa, kodwa manje seliye omunye izivakashi zakwamanye amazwe ngokuvakashela Netherlands. Volendam Itholakala Ijsserlmeer akhelene amanzi North Sea. Uma kusukela Amsterdam Schipol International Airport-30 km emzini Amsterdaam ngokwawo imayelana 20 km. Ekuqaleni Volendam kuyinto endaweni ethekwini Edam, idolobhana esikhiqiza ushizi-in the Netherlands. Uma Edam ukwakha port ayo, Volendam ke alishiye futhi benziwa a okudotshwa Volendam. Atmosphere kanye nezindlu Volendam wayemuhle, zihlanzekile futhi zigcinwe kahle. Nakuba ezincane indlu encane futhi ndawonye, ​​abanikazi ebonakalayo kakhulu-ndlu kumelwe babe ekunakekeleni endlini lingkungannnya kahle. Endulo 2. Keukenhof, Lisse Omunye ezikhanga izivakashi kuleli Netherlands nayo kuwufanele ukuvakashela iyona Keukenhof, izinto ezifana ensimini Botanical noma flower ingadi. Ezikhangayo Dutch lena etholakala emzini Lisse, Keukenhof itholakala eningizimu yeNetherlands, okungukuthi edolobheni Lisse, imizuzu engaba ngu-30 ngebhasi kusuka Amsterdam. Park indawo cishe 80 amahektha, lokhu kubuye flower ingadi kunawo wonke eYurophu, ngakho ebizwa The Garden of Europe. Akumangalisi Keukenhof isibe omunye ethandwa kakhulu izivakashi eNetherlands. Ngokusekelwe ulwazi ngathola, zonke entwasahlobo izimbali abangaphezu kwezigidi eziyisikhombisa ezifuywa ukuheha izivakashi. Kufanele kuqashelwe ukuthi nje kuphela Tulips ingajatshulelwa, kodwa futhi izinhlobo ezahlukene izimbali ezifana hyacinths, daffodils, ngisho orchid. Izivakashi Bangaphezu kuka 800,000 ekhaya futhi phesheya beze kuleli paki njalo ngonyaka. Kubathandi izimbali futhi abathandi izithombe, 'amandla' umthetho ukuvakashela Keukenhof. Futhi uqiniseke alethe ikhamera wasithatha ubuhle sale nsimu flower. 3. Canal Cruise, Amsterdam Amsterdam iyindawo wavakashela kakhulu eYurophu izigidi zezivakashi abeza ukuhlola edolobheni elihle njalo ngonyaka. Lena idolobha kakhulu ehlelwe kahle, ngekhulu le-17 lo muzi isikhungo sezomnotho emhlabeni futhi namuhla enhlokodolobha iqembu Europe. Lokhu akulona idolobha elikhulu kakhulu bonke ezikhangayo main omuzi kukhona kalula ngezinyawo. Lo muzi siyinhlanganisela ephelele yomlando futhi izakhiwo zesimanje. Umuzi uyaziqhenya imvelo yalo yokwamukela. Statistically ukukhuluma Angisona abanayo idatha ngqo, kodwa lo muzi lidlule emadolobheni amakhulu aseYurophu in the number of amabhayisikili, emiseleni, amabhuloho, yeshashalazi, izimakethe njll Isikhathi esingcono kakhulu ukuvakashela Amsterdam Isikhathi esingcono kakhulu ukuvakashela Amsterdam kuyinto July no-August, ngenxa sezulu ezinyangeni kukhona okungcono. Nakuba ngingakaze extreme, Amsterdam liyisiphephelo izivakashi unyaka. Ngisho evakashele Amsterdam ngo offseason ukuba babe izinzuzo zalo siqu njengoba uyothola izaphulelo omkhulu kuwo wonke izindiza, amahhotela nezindawo zokudlela. In Amsterdam uzothola eziningi imikhosi kanye nezenzakalo uqhubeke zenzeke unyaka. Ngo Amsterdam, eNetherlands, kukhona tour kanye isiteshi amanzi okuyinto umxhwele kakhulu izivakashi. Tour umema izivakashi ukuthola isimo emzini Amsterdam kanye lomfula. Igama tour ukuthi akakuqabuki lena Amsterdam Canal Cruise.
Buyela isihloko travel, kulokhu ngizokutshela ezinye nokuzwa ukuthi kumele wavakashela uma uku State French. Izindawo ezilandelayo ziyadingeka ukufika tour lapho uvakashela e-State French 1. Eiffel Tower, Paris Yiqiniso, iningi izivakashi endaweni yokuqala yaqashelwa abantu abaningi futhi kuwufanele amandla ukuvakashelwa yakho Eiffel Tower. Ngoba le ndawo a izigidi enhle eziningi imibhangqwana bafuna ukuphakamisa, uthando, kukankosikazi, njll Eiffel Tower uqobo lakhiwa iminyaka ephakathi 1887 sampat 1889 ukugubha leminyaka le Revolution French nge ukuphakama 275 meters. Noma kunjalo ngeke nyesel deh ukuza lapha ikakhulukazi ngenkathi ngokuletha umlingani wakho 2. Louvre, Paris Louvre isibe edume kunazo zonke zemibukiso yobuciko, futhi kuba ekhaya art nomlando kuka ungakwazi nithin Baguette at. Leonardo da Vinci Mona Lisa (La Giaconda) ngokumamatheka smile Ayindida, kodwa uzothola ezinye izicucu kuka 35,000 lapha, kusukela kwakudala art zanamuhla. Bonus tip: wanezela a yesimanje mbhoshongo Louvre, ukukhanga udumo French with Ancient Egypt (futhi asetshenziswa njengoba indawo Da Vinci Code). 3. Palace of Versailles, Versailles Ukuhamba Paris futhi ingaphakathi sithola Palace of Versailles, emzini lamakhosi nezindlovukazi France kuze La guillotine ukuthatha amakhanda abo. Palace uhlala futhi kuba ngendlela emangalisayo ukuchitha usuku kanye Hall of Mirrors, izingadi omangalisayo nemithombo futhi lizungezwe edolobheni ukuthi ine ezinye zokudlela umhlabeleli endaweni (kuhlanganise Paris). 4. French Riviera, Cannes kanye Monaco French Riviera kuyinto intandokazi beach ukuphela for the glitterati, nabanye emabhishi exotic kakhulu emhlabeni esekelwa abanye amahhotela zikanokusho kakhulu, amathuba lokudlela nezitolo iziphazamiso ukuba kutholakale kuphi emhlabeni. The sezulu esifudumele ebusika futhi ishisa kakhulu ehlobo, kodwa ungaphuthelwa Cannes Film Festival kanye nezinkanyezi zezwe ifilimu uma kungenzeka.
Akuyona nje idume football yedwa English. Kodwa, of course, izitolo eziningi umlando kanye nezindawo nesithakazelo ukuvakashela. Uma une ithuba eze UK, ezinye izindawo ezithakazelisayo kanye nemisebenzi kungenziwa wavakashela. 1. Tower of London Tower of London, etholakala maphakathi London kuyinto yezivakashi yomlando futhi usekhonze nomndeni wasebukhosini ngokwenza amakhulu eminyaka. Ngaphandle lokhu umbhoshongo futhi wakhonza njengephayona ejele, indawo yokugcina ngisho zoo. Lokhu umbhoshongo ubuye ekhaya ukuze umqhele wobukhosi ukuthi ungabona. Umbhoshongo ivuliwe kusukela ngoLwesibili kuze kube ngoMgqibelo kusuka ngo 10:00 kuya ku 18:00 Isikhathi sendawo. With an Imali yokungena zamaRandi 17 (cishe abayizinkulungwane Rp..230) ungavakashela yezindawo wavakashela izivakashi eziningi lokhu. 2. Tower Bridge, London A isakhiwo kanye sites umxhwele kakhulu enhlokodolobha, Tower Bridge eLondon iye wema iThames kusukela 1894 futhi ingenye sezakhiwo liyabonakala kakhulu emhlabeni. Lapha ungakwazi ukubona izindlela ulwazi panel ukuchaza mayelana nobuchwepheshe esetshenziswa eminyakeni edlule ukugcina Tower Bridge sinyathelo. Ungavakashela kule ndawo nsuku zonke kusukela ngo 10:00 kuya ku 18:30, namakhefu akhokhelwayo 7 euros (mayelana Rp.95 abayizinkulungwane). 3. Big Ben umbhoshongo Big Ben eliye lenza abe icon emzini london. A clock umbhoshongo omkhulu akhiwe ekupheleni esenyakatho Palace of Westminster in London Lona iwashi umbhoshongo wesithathu kakhulu emhlabeni. Uma kukhona eLondon, ungase Ungaphuthelwa ithuba ukubukela iwashi waqala ngophawu-31 May 1859 lokhu. In the umbono kusihlwa imitha 96,3 umbhoshongo okusezingeni kuyoba sihle ngoba ahlobisa izibani yellow golden Palace of Westminster. Big Ben kwake kwaba kunayo ezine-emaceleni clock umbhoshongo emhlabeni, kodwa ke wanqoba Allen-Bradley Clock Tower e Milwaukee, Wisconsin, USA.
United Arab Emirates has amabili yisakhiwo sodumo emzini ithi, okungukuthi Abu Dhabi kanye Dubai. Izinzuzo Tourist ephethwe Dubai ngoba Dubai bancika zokuhweba kanye nokutshalwa kwezimali sokukhula komnotho. Lokhu Ngokungafani Abu Dhabi lapho bathembele amafutha Ukuhweba. Ngakho lapha mina baye benza uhlu ezinye the best izivakashi e
1. Burj Al Arab Burj Al Arab kuyinto Ihhotela elibizayo elise Dubai, United Arab Emirates. Burj Al Arab isakhiwo, kwadalwa Tom Wright, ifinyelela ukuphakama 321 meters, 66 emabhilidini futhi isakhiwo ende kunazo zonke iphakeme ngokugcwele esetshenziswa ihhotela. Lesi sakhiwo umi esiqhingini artificial akhiwe 280 m kwezilwandle e Gulf. Burj Al Arab is owned by Jumeirah. Ihhotela ngokuvamile zibizwa ngokuthi inkanyezi 7. It kubhekwa a ihaba yilabo emkhakheni wezokuvakasha. It is ibuye ibukwe njengento indlela "ukushaya" omunye amahhotela owanibiza nehhotela star 6. 2. Jumeirah Beach Jumeirah Beach ebhishi edume kakhulu Dubai. Lokhu beach osuka kuze 7 km, ihlukaniswe emabhishi eziyisikhombisa futhi beach ngamunye elula eside for miles. 2 Beach tho e ngamunye Jumeirah Park, futhi Wild Wadi. 3. Burj Khalifa Burj Khalifa uyisibonelo izakhiwo esiphezulu kanye emangalisa kakhulu. Towers, 153 emabhilidini touch okusezingeni esibhakabhakeni emzini Dubai. Lesi sakhiwo kuhlanganisa izingxenye ehhotela, namahhovisi, Residential Ikamero nazo zonke izindawo eziphambili. 4. Palm Jumeirah Palm Jumeirah has konke okudingayo ukuze ujabulele i iholide Amazing. Kubandakanya amagama ehhotela emhlabeni wonke, izindawo izivakashi kukhona amazing, okunethezeka fashion kanye zezitolo. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukuphumula noma Gxila a holiday egcwele ukuzilibazisa nokuzijabulisa, lena yindawo idolo ngempela ukuvakashela. Streets Café Sandwich In Armenia Armenia kuyinto engesiyo kude emazweni Europe ngakho waseTurkey izwe. Nakuba izwe impela esiyingqayizivele, ngoba njengoba umbuso wokuqala ongumKristu emhlabeni, kodwa uzizwa izwe is akubone ukudla Armenia akukona sihluke kakhulu jikelele njengoba yamazwe Europe. Isinkwa kanye isobho dish, noma Pasta kalula atholakala njalo. Abantu lapha futhi othanda ukuba adle izithelo
5. iyizwe sezintaba South eCaucasus esifundeni Eurasia. Akhiwe engxenyeni esenyakatho West Asia, izungezwe Turkey entshonalanga, Georgia, uye ngasenyakatho. Armenia kuyinto owodwa, multi-party, iBurma yelinyenti. Kusukela ngekhulu lesi-9 kwaze kwaba ngekhulu le-13 lo muzi wawuyinhloko-dolobha yombuso uMbuso Pagan, umbuso wokuqala esihlanganisa zonke izifunda lapho kuyoba Myanmar Modern. Phakathi nekhulu, kunezinhlobo ezingaphezu kuka 10,000 amathempeli pagodas Yangon owaziwa ngokuthi iRangoon, iyinhloko-dolobha yangaphambili iBurma (eMyanmar) kanye dolobha eYangon Region. Yangon yiyona idolobha elikhulu kunawo wonke ezweni elinabantu abangaphezu kwezigidi ezingu ezinhlanu, futhi iyona sezentengiselwano agan City igama Bagan (eyayaziwa ngokuthi Pagan) is an umuzi wasendulo (idolobha elidala) lisendaweni ka Mandalay eMyanmar / Burma. Kusukela ngekhulu lesi-9 kwaze kwaba ngekhulu le-13 lo muzi wawuyinhloko-dolobha yombuso Pagan,
9. iyizwe ogama labantu inkolo iningi Buddhist, kodwa emzini Yangon sikwazi ukubona izinsalela isonto lamaKatolika kwadingeka ubudala kakhulu. Cathedral Saint Mary sika esontweni elidala Catholic elise Ihhotela ekamelweni eziningi isikhala capsule, okusho kuphela isiziba nje uvumelane kuphela sokulala rebaan kungatholakala emazweni amaningana ezifana Japan, Singapore noma Malaysia. Ihhotela capsule ufuna ukuthola nightlife
13. a lot of izindawo! ngempela okuningi! Manje ufuna ukuthola indawo ngohlobo lokuzijabulisa ukunquma? uma ufuna ukuthola ukuzijabulisa like market ebusuku nge ezihlukahlukene Ungabona ngokusebenzisa ividiyo ngezansi (ngaphezu izithombe njengoba echazwe esihlokweni esandulele), lokhu indawo e Nelson Street, uma ephuma esiteshini MTR kuyoba imiyalelo ukuphuma Transportation ukuze Macao abavela eHong Kong uhlale khona nsuku zonke futhi uhlale khona njalo ngehora, ngakho akudingeki ukuba sikhathazeke, uye ngqo counter, ukuthenga ithikithi, balindele ihora sokuhamba ke waya Macau. Impela ufuna ukwazi ukuthi ukuya Macau abavela eHong Kong, i inothi wokuqala kulula kakhulu. Ezokuthutha ukuba Macao abavela eHong Kong uhlale khona nsuku zonke futhi uhlale khona njalo Macao Macao noma Macau isivele umuzi ogcwele ukuzijabulisa, okuyinto Itholakala emngceleni Guangdong esifundazweni enyakatho ezibhekene South China Sea. Umuzi akuseyona imfihlo ukuthi ibhaliswe ngokomthetho emhlabeni ukugembula Izindawo Beautiful Iningi in the World Izindawo Beautiful Abanengi World Famous - World ebanzi kakhulu ngempela ukucabanga ukuthi abaningi abavakashela ukuthi kungenziwa wavakashela kunoma yiliphi izwe emhlabeni futhi mhlawumbe uma ufuna ukuvakashela ngamunye ngamunye ngokuqinisekile kuthatha isikhathi eside kakhulu, futhi ngisho nangalesosikhathi uma ukwazi. Uma ukhuluma izindawo izivakashi emhlabeni ngokuqinisekile wehlukile kakhulu futhi unalo ubuhle ukuthi ahluka, kodwa kukhona abanye abacabanga ukuthi kukhona abanye amasayithi babe ubuhle kungemalengiso futsi odumile emhlabeni, kodwa emuva izivakashi nakuba ubuhle has a ezithakazelisa kakhulu kodwa akanawo kusho kancane eyaziwayo emehlweni emhlabeni akunjalo? izivakashi eziningi, futhi uma it has a lot of izivakashi ezivela emhlabeni wonke bangaqiniseka ukuthi izingosi ngempela abadumile kakhulu. Well, lapha kukhona okunye ukwaziswa izivakashi spot amahle kakhulu anayo ezweni ngalinye ngokusho sepengatuhan ngineminyaka kakade odumile izivakashi izindawo emhlabeni.
17. Kuta Beach Bali itholakala eningizimu Denpasar, capital Bali sika the Republic of Indonesia unikeza ubuhle omkhulu ogwini futhi Kuyaziwa emehlweni emhlabeni.
21. okuthiwa Komodo Island kuyinto island wathola izilwane eziningi ezingavamile zivikelwe isimo Republic of Indonesia. On Komodo island ukuthi itholakala e Nusa Tenggara Islands ngokuqondile empumalanga esiqhingini Sumbawa ngaphezu ujabulela ubuhle bemvelo isiqhingi futhi zijabulela indawo yemvelo izilwane zasendle ukuthi kukhona lengatfolakali ukuthi nezilo. Mount bromo ezinhle ezikwenza sentaba laphetfwe eNtabeni bromo ngempela ukuheha izivakashi nabaphesheya.
25. Ungabonisa ukuhlangabezana e Probolinggo, East Java, Indonesia. Mount Fujiyama Mount Fuji 2. eJapane, esisogwini emngceleni we Shizouka futhi Yamanashi Prefecture ubuye ezithakazelisayo ukuvakashela izivakashi. Izintaba anezici ekugcineni nge ungqimba ice ukuthi iyona enhle kakhulu izivakashi amabala emhlabeni odumile. Izindawo Iningi Beautiful in the World Famous
29. Ingadi once elihle eligcwele izimbali ejwayelekile of Japan wenza umkhathi fresh ibe izivakashi futhi ngokuqinisekile umxhwele kakhulu. Ueno Park kuyinto ingadi ezinkulukazi esemgwaqweni Tokyo Japan futhi omunye odumile izivakashi amabala emhlabeni.
33. waterfall has a beauty enkulu kakhulu emangalisa izivakashi. Waterfall ukuthi itholakala emngceleni international phakathi US kanye Canada kuyinto izivakashi ibala abadumile emhlabeni futhi izihambeli eziningi abafuna ukubona ubuhle waterfall ephawulekayo kakhulu. Grand Canyon Grand Canyon kuyinto umhosha enkulu owadalwa iColorado. Lokhu spot izivakashi kuyinto izivakashi endaweni edume kakhulu futhi wayevame izivakashi ezivela Negar ehlukahlukene, ngoba uzizwa amazing bemvelo ngeke aneliseke uma evakashele lezi ezikhangayo kanye kuphela. Antelope Canyon enhle kakhulu izivakashi indawo America esilandelayo Antelope Canyon, lokhu umhosha yindawo izivakashi ubuye odumile kakhulu emehlweni emhlabeni, ngobuhle izindonga basuke ovuthayo njengoba imisebe yelanga eshisa abalitholela indawo ngaphakathi kuba enhle kakhulu futhi ebukekayo. Antelope Canyon itholakala ku Ikhasinkomba, Coconino Country, Arizona, United States.
35. Lake District Tourist eliganukejako UK lena entabeni has a elikhulu, izivakashi eziningi abeza ezikhanga izivakashi ezifana District Lake in the UK eze. Cambridge emkhathini emangalisayo e Cambridge UK ngenhloso komfula izakhiwo zasendulo ukuthi namanje zigcinwe kahle.
39. Uma Thailand kukhona zokungcebeleka eziningi ezinikeza ezivelele bemvelo abadume emhlabeni omunye Koh Chang. Kwakuthi Kwakugcwele Yag park olwandle kule izivakashi Thailad ezivela emhlabeni wonke, ngenxa ubuhle indawo ithule cwaka futhi inokuthula ukwenza izivakashi ngizizwe ngisekhaya the endaweni izivakashi. Koh Samui e Koh Samui kuyinto endaweni izivakashi ukuthi ubuye izivakashi abaningi bezinye izizwe ikakhulukazi ngesikhathi sasehlobo ngokuqinisekile izivakashi eziningi abavakashela indawo. Mong Kok iyona shopping ephelele kakhulu futhi esiqinile
43. Ukuqala enxanxatheleni yezitolo, ukuthenga kuze indawo yokuhlala, ngokuvakashela Mongkok
Posted by needsjobslowongankerja at 4:40 PM